Izindlela Ezi-8 Zokudala Okuqukethwe Okudala Amakhasimende | Martech Zone
Lawa masonto ambalwa edlule, besikade sihlaziya konke okuqukethwe ngamakhasimende ethu ukukhomba okuqukethwe okuqwashisa kakhulu, okubandakanya, nokuguqula. Yonke inkampani enethemba lokuthola ukuhola noma ukukhulisa ibhizinisi labo online kufanele ibe nokuqukethwe. Ngokuthembela negunya ukuba okhiye ababili kunoma isiphi isinqumo sokuthenga nokuqukethwe kushayela lezo zinqumo ku-inthanethi.
Lokho kusho, kudinga ukubheka ngokushesha kufayela lakho le- analytics ngaphambi kokuthi uthole ukuthi okuqukethwe okuningi akuhehi lutho. Njengoba kunikezwe izindleko zokwakha isiza, ukusebenzisa lelo sayithi, ukucwaninga imakethe yakho, nokukhiqiza lokho okuqukethwe - kuyihlazo ukuthi imvamisa ayikaze ifundwe.
Sigxile amasu ethu kumakhasimende ethu kulo nyaka ukuze konke okuqukethwe kungabi utshalomali olukhulu. Izindlela ezimbalwa esisebenza ngazo ukuthuthukisa okuqukethwe kwamakhasimende ethu:
I-Aggregation - Eminyakeni edlule, amanye amaklayenti ethu aqoqe izindatshana eziyishumi nambili konke kugxile esihlokweni esifanayo. Sifaka lokho okuthunyelwe ku-athikili ebanzi ehleleke kahle futhi elula ukuthi abafundi bayigaye. Ngemuva kwalokho siqondisa kabusha wonke ama-URL angasetshenzisiwe ku-athikili ephelele futhi siwashicilela njengamasha nge-URL esezingeni eliphezulu.
Ukufuduka - Amanye amaklayenti ethu akhiqiza ama-athikili, ama-podcast, namavidiyo - konke ngokwehlukana. Lokhu kuyabiza futhi akudingeki. Olunye lwezinhlelo esizakhile lunamakhasimende ethu kanye ngenyanga ukurekhoda ama-podcast ambalwa. Uma siqopha ama-podcast, siqopha nakuvidiyo. Ngemuva kwalokho sisebenzisa ukuloba kwalezo zingxoxo ukondla ababhali bethu ukuthuthukisa okuqukethwe. Njengoba ukusebenza kokuqukethwe kukhuphuka, singahle sisebenzise ama-infographics namaphepha amhlophe ukunweba impendulo bese sikhokhelwa ukukhushulwa ukwandisa ukufinyelela kwabo.
Enhancement - Ama-athikili amaningi abhalwe kahle kepha aphelelwe yisikhathi noma awanazo izithombe. Sisebenzela ukuthuthukisa lezo zihloko, futhi sizishicilela ku-URL efanayo nezindatshana ezintsha. Kungani ubhala i-athikili entsha ngokuphelele yesihloko osinikeziwe ngomzamo osuvele usetshenzisiwe?
Lokho ngamasu amathathu nje esiwasebenzisayo ukuthuthukisa okuqukethwe okusebenza kangcono. Uzakwethu, uBrian Downard, ukhombe izindlela ezithile zokwenza okuqukethwe okudala amakhasimende ku-infographic yakhe entsha, Izindlela Ezi-8 Zokwenza Okuqukethwe Okudala Amakhasimende:
Dala okuqukethwe okwazisa ngomkhiqizo KANYE nokuthengisa - Musa nje ukudala okuqukethwe ngenhloso yokuheha abafundi, dala okuqukethwe okuguqula umkhondo nokuthengisa nakho.
Phendula imibuzo "yokuthenga kwangaphambili" ngokuqukethwe - Dala okuqukethwe ngemibuzo ethile oyithola njalo kumathemba akho nakumakhasimende.
Dala okuqukethwe nezinsizakusebenza eziningi ze- “evergreen” - Khetha izihloko zakho ngokuhlakanipha, ukuze okuqukethwe kwakho kungalahli inani lazo ezinyangeni ezimbalwa ngemuva kokudalwa.
Khulisa okuqukethwe KWESOKUDLA ngokukhangisa okukhokhelwayo - Thuthukisa okuqukethwe okuqwashisa ngomkhiqizo futhi "uphinde ubeke kabusha" labo bafundi ngokuqukethwe kwakho okugxile ekuguqulweni.
Dala abantu bokuqukethwe angaba ngumnikazi wenyama - Khulisa ngokuphawulekayo inani elibonakalayo lokuqukethwe kwakho ngokukufaka kwi-PDF elandekayo.
Sungula “igebe lolwazi” abantu abafuna ukulivala - Okuqukethwe kwakho kufanele kunikeze inani ngenkathi kushiya i- "cliffhanger" eyenza abantu bafune ukwazi kabanzi.
Thuthukisa umklamo wakho umdlalo ngehluzo zobuchwepheshe - Abaningi bethu ababona abaklami abakhulu. Esikhundleni salokho, thola futhi uthenge izithombe ezenziwe ngaphambilini kanye nemidwebo yokuqukethwe kwakho.
Faka okuqinile, okuhlakaniphile ukubizela esenzweni - Ungalokothi ushiye abafundi bakho belenga, banikeze isenzo esicacile okufanele basithathe ukuze bakwazi ukuthatha isinyathelo esilandelayo.
Vele, uma udinga usizo - qiniseka ukuthi uhlola okukodwa kwe- Izifundo ezinhle zikaBrian noma ungaqasha inkampani yethu yokuqukethwe!
Tags: UBrian Downardshayela esenzweniukwenziwa kokuqukethweimiqondo yokuqukethweUkukhangisa Okuqukethweukukhushulwa kokuqukethwedala amakhasimendectaamakhasimendedesignisihlahla esivamileokuqukethwe okuluhlaza njaloihluzoukukhangisa okukhokhelweukuthenga kwangaphambiliukuklama kobuchwephesheisinqumo sokuthengaokuqukethwe kokuthengisa
Amagama Wokwakheka Kwemidwebo AmaNoobs Avame Ukudideka
Umthelela Wezindlela Zokumaketha Kwedijithali Kuzinyunyana Zezikweletu Nezikhungo Zezezimali